Izindaba - Yikuphi ukusetshenziswa okuhlukile kwezinto ezahlukahlukene ze-Pointer Pattern Aluminium Plate？
Yikuphi ukusetshenziswa okuhlukile kwezinto ezahlukahlukene ze-Pointer Pattern Aluminium Plate？
Umsebenzi oyisisekelo wamapaneli we-aluminium anephethini ukuvikela ukushelela. Izimo zethu ezivamile zohlelo lokusebenza ngamabhasi, ama-escalators, ama-elevator, njll., Lapho kusetshenziswa khona amapaneli e-aluminium anephethini ukuvikela ukushelela. Kulezi zindawo, izidingo zokusebenza zamapaneli we-aluminium aziphezulu, futhi ama-panel ayi-1060 aluminium angahlangabezana nezidingo zokusebenza. Manje uyini umehluko phakathi kokusebenza okuhlukile nokusetshenziswa kwento ene-aluminium enephethini? Okulandelayo uchungechunge oluncane lokwethula kuwe.
Imishini yesiqandisi nayo idinga i-anti-skid, kulezi zindawo, ukusebenza kwe-anti-rust kuyinkomba eyisihluthulelo, ukusebenza kwe-aluminium eyi-1060 kwehlulekile ukwenza ukusebenza kwefriji anti-skid, i-3003 aluminium plate njenge-anti-rust aluminium plate, yi-anti- skid projekthi ezindaweni ezimanzi. Ngaphezu kwepuleti le-aluminium engu-3003, i-3A21 aluminium plate nayo ivame kakhulu, konke kungochungechunge lwe-3 lwe-aluminium manganese alloy plate.
5052 Iphethini le-aluminium elinephethini lisetshenziswa kakhulu endaweni yasolwandle.
Enye yezinzuzo ze-5 plate aluminium plate ukuthi ingamelana kahle nokugqwala kwemvelo ye-acid ne-alkali, ngakho-ke i-5052 yohlobo lwe-aluminium plate iyinto esemqoka yokulwa ne-skid endaweni yasolwandle. Vele, ku-plate ye-aluminium e-5, kukhona nemikhiqizo efana no-5083, 5754, njll., Engasetshenziswa ukukhiqiza ipuleti le-aluminium enephethini.
Yikuphi ukusetshenziswa kwamapaneli e-patterned aluminium? Kukhona nesimo sokufaka isicelo, njengeplatifomu yomsebenzi wasemoyeni, izinga lokushisa eliphakeme lokulwa ne-skid, i-asidi ephezulu kanye ne-alkali corrosion imvelo, ngenxa yezizathu zokuphepha, ukusebenza kwepuleti le-aluminium ephethini kuphakeme kakhulu, kwazalwa ipuleti le-aluminium elenziwe ngo-6061. 6061 aluminium ipuleti zonke izici zokusebenza kuhle kakhulu, zinganikeza ukuvikelwa okuqinile kwemvelo enobungozi kakhulu anti-skid.
Okuqukethwe okungenhla ukusetshenziswa okuhlukile kwezinto ezahlukahlukene zepuleti le-aluminium yokuhlobisa uKetchum akwethulela yona. Ngenqubekela phambili eqhubekayo yobuchwepheshe bokuncibilikisa i-aluminium kanye nokuvela kwenqubo yokukhiqiza, izinhlobo nezinto zokwenziwa kwepuleti le-aluminium enephethini kuzoba ngokwengeziwe, futhi kuzodlala indima ebalulekile ezimbonini eziningi.
intengo yeshidi le-aluminium, Eshibhile Aluminium AmaSpredishithi, 7050 aluminium ishidi, Abahlinzeki be-Aluminium Sheet Metal Anodized, intengo ye-aluminium 6061 intengo, I-Tread Plate Aluminium AmaSpredishithi,